ATTN - လူမှုမီဒီယာ application တည်ဆောက်သူများ | Martech Zone
တွစ်တာ. Facebook က။ LinkedIn ။ ငါ့ ဘလော့ဂ်။ ငါ့ ကုမ္ပဏီ.
ဒါတွေအပြင်ငါမှာဂူဂဲလ်အကောင့်တစ်ခုရှိတယ်။ ငါ့မှာ မြေကြီး အကောင့်။ ငါ့မှာ WordPress အကောင့်။ ငါမှာ Yahoo! အကောင့်။ ငါ Flickr ကိုရောက်နေတယ်။ အရသာ။ Technorati ။ Ning ။
ကြောင်းမတိုင်မီက MySpace ရှိခဲ့သည်။ နှင့် AOL ။ အဲ့ဒီတုန်းက Prodigy အကောင့်တောင်ရှိတယ်။
အွန်လိုင်းပေါ်မှာကျွန်တော်လုံးဝနေရာတိုင်းရှိနေလို့ပါ။ ဒီတော့ဒီမှာဆော့ဗ်ဝဲကိုဖွင့်တဲ့အခါ၊ ကမ္ဘာပေါ်မှာဘာကြောင့်ငါ့ကိုအတူတူမေးခွန်းတွေဖြည့်ဖို့၊ အတူတူဓာတ်ပုံတွေတင်မယ်၊ logins နဲ့ password အသစ်တင်ရမလဲ။ မင်းဘာကြောင့်ဒီလိုလုပ်ရတာလဲ အဘယ်ကြောင့်သင်သည်သင်၏လျှောက်လွှာ၌ဤမျှနာကျင်စေမလဲ
ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုအင်တာနက်ပေါ်တွင်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ သွားသုံးပါ ငါ့အတွက်လွယ်ကူစေပါ Oauth ကို သုံး၍ ကျွန်ုပ်၏ကွန်ယက်တစ်ခုမှသတင်းအချက်အလက်အားလုံးကိုရယူပြီးသင်၏အသစ်တစ်ခုအတွက်၎င်းကိုသုံးရန်ပြောပါ။
ကျွန်ုပ်သည် login အသစ်တစ်ခုရှာရန်မရ၊ ငါဘယ်တော့မှမှတ်မိမှာမဟုတ်တဲ့စကားဝှက်တစ်ခုကို (နှစ်ကြိမ်) ပေးပြီးစိတ်မပျက်စေနဲ့။ အဲဒါကမင်းရဲ့စည်းကမ်းတွေကွဲပြားတဲ့အတွက်တခြားစကားဝှက်နဲ့မကိုက်ညီဘူး။ ကျွန်ုပ်၏အီးမေးလ်လိပ်စာကိုအတည်ပြုရန်မလုပ်ပါနှင့် - ကျွန်ုပ်သည်အခြားဝန်ဆောင်မှုများအတွက်ပြုလုပ်ပြီးပါပြီ။
Heck, အကိုသုံးပါ OpenSocial API ကောင်းမြတ်ခြင်းအတွက်! သငျသညျအကြှနျုပျကိုရနိုင်မည်ဖြစ်သည် နှင့် သူငယ်ချင်းများအားလုံး
တွစ်တာ၊ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်၊ ငါမင်းကိုမလိုအပ်ဘူး သင့်လျှောက်လွှာမလိုပါ မင်းလုပ်သင့်လုပ်ထိုက်တာကနောက်ဆုံးဆယ်စုနှစ်အတွက်ငါဖြေခဲ့တဲ့မေးခွန်းတွေအားလုံးပဲ။ မင်းငါ့ကိုအထင်ကြီးစေချင်လား အပြင်ကိုထွက်ပြီးငါနဲ့ပတ်သက်ပြီးသင်ရှာတွေ့နိုင်တဲ့အချက်အလက်အားလုံးကိုခြစ်ပြီးခြစ်ခြစ်လိုက်ပါ။
ဒီတော့ပျင်းရိဖြစ်ခြင်းဖြတ် ငါပျင်းရိဖို့မျှော်လင့်ထားသင့်ကြောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ငါ့အဘို့ကြိုးစားအားထုတ်ပါ။ ထိုအခါငါသင်၏လျှောက်လွှာစမ်းပါလိမ့်မယ်။ အဲ့ဒီအချိန်အထိငါ့ကိုတစ်ယောက်တည်းထားခဲ့ပါ
Tags: AOLအရသာရှိသောFacebook ကFlickrမြေကြီးlinkedinငါ့နေရာမရှိprodigyလူမှုမီဒီယာ developer များနည်းပညာတွစ်တာWordPress'to yahoo
6:2010 pm တွင်ဇူလိုင်လ 6, 38
6:2010 pm တွင်ဇူလိုင်လ 11, 31